साउथ अभिनेता अल्लु अर्जुनको कति छ सम्पत्ति? - Everest Dainik - News from Nepal
साउथ अभिनेता अल्लु अर्जुनको कति छ सम्पत्ति?
एजेन्सीः साउथ फिल्मका स्टार अल्लु अर्जुन एक्सन, रोमान्सको जस्तोसुकै भूमिकामा आफूलाई उतार्न सक्छन् ।
उनले बाल कलाकारको रुपमा नै साउथ फिल्ममा काम गरेका थिए । उनको पहिलो डेब्यू फिल्म भने सन् २००३ मा रिलिज भएको ‘गङ्गोत्री’ हो ।
उनले १९ भन्दा बढी फिल्ममा मुख्य भूमिकामा रहेर काम गरिसकेका छन् । यसका साथै अल्लु अर्जुनले थुप्रै अवार्ड पनि जितेका छन् ।
यसका साथै उनका जीवनका अन्य थप कुराहरु र उनको आम्दानी तथा सम्पत्ति धेरैलाई चासो हुनसक्छ? यी सबै कुराको जानकारी पाउन यहाँ क्लिक गर्नुस्
ट्याग्स: अल्लु अर्जुन